Dad Gaajo & Haraad ugu geeriyooday Gobolka Gedo | Keydmedia
Dad Gaajo & Haraad ugu geeriyooday Gobolka Gedo
Beled Xaawo (KON) - Ugu yaraan 5 Ruux ayaa la xaqiijiyay in Maalmihii lasoo dhaafay ay Gaajo & Haraad ugu geeriyoodeen Deegaanno ku yaalla Gobolka Gedo, ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Cabdi Barre, Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Gobolka Gedo, ayaa xaqiijiyay Geerida Dadkan Soomaaliyeed ee Gaajada & Haraadku ay dileen, waxaana uu xusay in 5-ta Qof 4 kamid ah ahaayeen Caruur, halka Qof 5-aadna uu ahaa Ruux da' ah oo ku noolaa Deegaanno kala duwan oo hoostaga Degmooyinka Ceel-Waaq & Beled-Xaawo.
Mas'uuliyiinta & Odayaasha Deegaanka Gobolka Gedo, ayaa walaac xoogan ka muujiyay Gaajada & Biyo la'aanta baahsan ee ka jirta Gobolka oo yimid markii ay dhamaadeen Biyihii ay Dadku cabi jiteen ee ku jiray Ceelasha.
Dadka Dhibaataysan ayaa lagu soo waramayaa inay u badan yihiin Xoolo Dhaqato & Beeralay, kuwaasi oo hadda aan haysan Cunto & Biyo ay cabaan, iyadoo taasi ay keentay inay Dadka liita sida Caruurta & Waayeelada ay u dhintaan Gaajo & Haraad.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Bishii tagtay booqday Gobolka Gedo, ayaa u sameeyay Shacabka Gobolkaasi Balan-qaad ah in DFS ay caawin doonto Dadka dhibaataysan, hase ahaatee wali kama uusan soo bixin balan-qaadkiisa.